Sennheiser သည်ဒူဘိုင်းတွင် Sennheiser အသံအကယ်ဒမီကိုလက်ခံကျင်းပရန်အတွက်နောက်ကွယ်မှအဖွဲ့များပူးပေါင်း | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ပြကွက်များ၏နောက်ကွယ်အတူတက် Sennheiser အသင်းများဒူဘိုင်းအတွက် Sennheiser အသံအကယ်ဒမီ Host မှ
အဆိုပါပြကွက်များ, တစ်ဦးဦးဆောင်ဒူဘိုင်းအခြေစိုက်ထုတ်လုပ်မှုအိမ်သူအိမ်သားနောက်ကွယ်မှအောင်မြင်စွာ Sennheiser အရှေ့အလယ်ပိုင်း၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်ရုပ်ရှင်ပညာ၏အသံရှုထောင့်အသေးစိတ်တစ်ဦးအလုပ်ရုံတည်ခင်းဧည်သိရသည်။ အဆိုပါအခမဲ့မိတ်ဖက်စီစဉ်ဒူဘိုင်းစတူဒီယိုစီးတီး, ဒူဘိုင်းယဉ်ကျေးမှု၏ပြည်ခိုင်ဖြိုးလက်ခံရရှိထားတဲ့ငါးရက်ကြာအဖြစ်အပျက်, ကွဲပြားမှုနှင့်နည်းပညာစပွန်ဆာတက်ရောက်ရန် VITEC။ အဆိုပါလေ့ကျင့်ရေးဧပြီလရဲ့ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်အတွင်းအရပ်ဌာနကို ယူ. In-depth တင်ပြချက်များနှင့်ဆန္ဒပြပွဲများနောက်ဆုံးပေါ်အသံဖြေရှင်းချက်၏အဖြစ်အထူးကြပ်မတ်လက်ပေါ်မိုက်ခရိုဖုန်း၏အခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအနေဖြင့်အရာရာကိုဖုံးလွှမ်းသည်ဟုအစည်းအဝေးများ, အထိမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်လမ်းအပေါင်းတို့အဘို့ကောင်းသောအလေ့အကျင့် featured post-ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်သင့်ရဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားသောအသံနှင့်အတူအလုပ်လုပ်။
အဆိုပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပြကွက်များ၏နောက်ကွယ် 2017 မှတဆင့်ဒူဘိုင်းအတွက်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပလိမ့်မည်ဟုနှစ်ဆယ်လေးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ရပ်များ၏စီးရီးအပေါ်မှတ်ချက်ပေးသည်ကုမ္ပဏီ၏မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာမစ္စတာမိုဟာမက် Salam တိုင်းပြည်တစ်ငှါရှာကြံ-ပြီးနောက် Blockbuster ဘဏ်ဍာအဘို့အဦးတည်ရာကိုရိုက်ကူးဖြစ်လာသည်အဖြစ်မကြာသေးမီနှစ်များတွင်ယူအေအီးရဲ့ထုတ်လုပ်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းအဆတိုးတက်မှုနှုန်းမမြင်စဖူး "ဟုပြောသည်။ ဤသည်ဒေသတွင်း၌နှင့်ပြကွက်များနောက်ကွယ်မှာရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးဘို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအခွင့်အလမ်းသစ်ဒေသခံအခွက်တဆယ်ကိုမှေးမွူကတိပြုပါတယ်တွေ့ရမယ်။ ထိုကဲ့သို့သော Sennheiser အဖြစ်အမှတ်တံဆိပ်များ၏ပူးပေါင်းနှင့်ထောက်ခံမှုကျွန်တော်တို့ကိုကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းအသိပညာကယ်နှုတ်တော်မူခြင်းနှင့်ဈေးကွက်အတွက်အလွန်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူ up-to-speed ကိုတက်ရောက်ဆောင်ကြဉ်းကူညီပေးသည်။ "
အဆိုပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအမှတ်တံဆိပ်များအတွက်သင်တန်းများအပေါ်ကျယ်ကျယ်အလေးပေးနှင့်ယခင်ကဒူဘိုင်းအတွက် SAE Institute မှတစ်ဦးကထိကအဖြစ်ငါးနှစ်သက်တမ်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ပညာပေး၏တဦးတည်းသောယောဟန်လို့ McGregor, Sennheiser အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေး Manager ကို (BDM) ကကောက်ယူခဲ့သည် ဖန်တီးမှုမီဒီယာလုပ်ငန်းများတွင်။ ပထမသုံးကာလ၏သင်တန်းကျော်သူဟာဒစ်ဂျစ်တယ် 9000, AVX, ek 6042, MKH 8000 ShotGun မိုက်ခရိုဖုန်း, Esfera ပတ်ပတ်လည်အသံမိုက်ခရိုဖုန်းနှင့် GoPro Hero2များအတွက်အသစ်များကို MKE4Element တွေကိုမိုက်ခရိုဖုန်းအပါအဝင် Sennheiser ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်အသံဖြေရှင်းချက်အပေါ်အသေးစိတ် Overview ပေးအပ်သည်။ ဤလယ်ပြင်၌နောက်ဆုံးပေါ်တိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်. တက်ရောက်လာအကြောင်းကြားနှင့်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့်အခါအသိပေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချအတွက်သူတို့ကိုကူညီလိမ့်မယ်။
အဆိုပါအလုပ်ရုံဖွင့်လက်တွေ့ကျတဲ့အစည်းအဝေးများကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်နှင့်သူတို့ကို set up နဲ့ post-ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်သင့်ရဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားသောအသံနှင့်အတူအလုပ်မလုပ်ဖို့ဘယ်လိုမည်သို့တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်မှန်ကန်သောမိုက်ခရိုဖုန်းကိုရှေးခယျြဖို့ဘယ်လိုကနေအရာရာကိုဖုံးလွှမ်းကြ၏။ အတွေ့အကြုံအနှစ်ကနေထူးခြားတဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုမျှဝေ၏ဝိညာဉ်မှာတော့နှစ်ဦးစလုံးထိုအဖြစ်အပျက်တက်ရောက်ခဲ့သူဒစ်ဂျစ်တယ်အသံ၏ carbide အသံ & Anas အယ်လ် Said Yahya ကရှိမုန်ချားလ်စ်အဲဒီလက်တွေ့ကျတဲ့အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းတက်ရောက်နှင့်အတူမှတ်တမ်းတင်တည်နေရာအသံဟာသူတို့ရဲ့ကျယ်ပြန့်အသိပညာမျှဝေပေးတယ်။
တက်ရောက်လာသူများထဲတွင် Sivaprasad Nandakumar လက်ထောက်ပါမောက္ခ, Manipal တက္ကသိုလ်မှမီဒီယာ & Communication ၏ကျောင်း, နှင့်သူ့ကျောင်းသားများ 8 ခဲ့ကြသည်။ သူကအဆိုပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျွမ်းကျင်စွာကောက်ယူနှင့်အသံစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်လက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းတစ်ခုတိကျခြုံငုံသုံးသပ်ချက်များကိုအကူအညီရခဲ့ "ဟုပြောသည်။ စာသင်ခန်းအသိပညာ၏အရေးပါမှုကို understating ခြင်းမရှိဘဲ, On-The-အလုပ်အတွေ့အကြုံနှင့်ဒီအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကနေရရှိမယ့်တွေအများကြီးလက်တွေ့ကျတဲ့အတိုင်းလိုက်နာရန်လွယ်ကူအစည်းအဝေးများသို့အချက်အလက်များ၏တစ်ဦးအထင်ကြီးအသံအတိုးအကျယ်ခြုံ့အဲဒီမှာအကူအညီပေးခဲ့၏။ "
ထုတ်ကုန် Sennheiser ကနေခဲ့ကြသည်မီးမောင်းထိုးပြနေချိန်တွင် "ဂျွန်အနေနဲ့ audio က solution ကိုအကဲဖြတ်တဲ့အခါမှာကျနော်တို့အဘို့အထွက်ကိုကြည့်သင့် features တွေပေါ်မယ့်အစားအာရုံစိုက်တစ်ဦးကြားနေထုံးစံ၌သူတို့ကိုဖော်ပြရန်ကြောင့်တစ်ဦးပွိုင့်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ၏ကုန်ကျစရိတ်အတော်လေးစိတ်ညစ်စရာဖြစ်နိုင်အောင်လက်ျာဘက်ရွေးချယ်မှုအောင်မကြာခဏဝေဖန်သည်နှင့်ငါသည်ငါ့ကျောင်းသားများကိုယုံကြည်နဲ့ကျွန်မယခုပိုကောင်းပြင်ဆင်ထားနေကြတယ် "ဟုသူကဆက်ပြောသည်။
2017 ၏ကျန်မှတဆင့်ပြကွက်များ၏နောက်ကွယ်, အလင်းရောင်အပါအဝင်ရုပ်ရှင်အားလုံးရှုထောင့်သို့ငုပ်ကြောင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မယ်ဇာတ်ညွှန်း, မျက်ကပ်မှန်, ဓာတ်ပုံနှင့်-Up ပါစေ။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကျွန်တော်ယူအေအီးအစိုးရ၏ပံ့ပိုးမှုနှင့်ပြည်ခိုင်ဖြိုးမှတဆင့်ဖြစ်နိုင်သောရာ၌အခွင့်အလမ်းများအပေါ်အမြတ်ထုတ်ရန်မှပိုကောင်းပြင်ဆင်ထားကြသည်ဒါကြောင့်တစ်ဖွဲ့လုံးကစက်မှုလုပ်ငန်း၏စံပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်" ဟုမိုဟာမက် Salam ကဆိုသည်။
#DontStoptheEducation: Sennheiser သည်အွန်လိုင်းကွန်ဖရင့်နှင့်အဝေးမှသင်ယူခြင်းဆိုင်ရာ Virtual စားပွဲဝိုင်းကိုကြေငြာခဲ့သည် - ဇူလိုင်လ 14, 2020
ပေါလုအဖြူ၏အမှတ်တရ - ဇွန်လ 14, 2020
audio အသံဖမ်းယူမှု အသံတည်းဖြတ် ရုပ်ရှင်ရုံ ထုတ်လုပ်မှု Sennheiser 2017-04-30
ယခင်: (In-သင်တန်း) facility အင်ဂျင်နီယာချုပ် (သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အင်ဂျင်နီယာချုပ် 2)